Ogaden News Agency (ONA) – Fadliga Soonka Maalinta 9aad (يوم عرفة) Ee Bisha Dul-Xijjah Ay Leedahay.
Fadliga Soonka Maalinta 9aad (يوم عرفة) Ee Bisha Dul-Xijjah Ay Leedahay.
Walaal maalinka Carafo waa maalin Ilaahay uu dhaafo gafafka, uuna ajiibo ducada adoomadiisa. Wuxuu Ilaahay u amaanaa malaa’igtiisa dadka taagan banka carafaat ee usoo xajjiyay gurigiisa barakaysan. Maalintaas waa maalintii uu Allaah SWT dhamaystiray diintiisa, uuna u kammilay addoomadiisa nicmooyinka oo dhan. Waa malinkeey soo dagtay aayadda qur’aanka ah ee hoos ku qoran: ” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا” . Waa maalin uu Allaah ku dhaartay uuna yirir: ” وشاهد ومشهود”
Nabigeena Muxammed (صلى الله عليه وسلم) wuxuu ku fassiray Shaahidku inuu yahay maalinka Jimcaha, Mashhuudkana in laga wado maalinka Carafo. Ibni Cabbaas iyo Cikrimah iyo mufasiriin kale waxay ku fasireen ”والشفع والوتر ” Maalinka Ciidda ah ee Al-Adxada iyo maalinka Carafo.
Maalinka Carafo waxaa loogu magac daray meesha Xujjaajtu eey taaganyihiin maalinkaas oo ah banaanka Carafaat. Maalinta sideedaad ee Dulxijjah ayay Xujjaajtu ka tagaan teendhooyinka MINA una qasdaan si ay u gutaan rukniga ugu wayn ee xajkooda. Waxay yimaadaan duhurka ka hor CARAFAAT, halkaasoo ey ku jamciyaan salaadda Duhur iyo Casir. Kadib Xujjaajtu waxay u istaagtaa sideey u gudan lahaayeen cibaadada Dhuuxeeda oo ah Ducada iyo baryada Allaah SWT.
Dadka aanan xajka gudanayn waxaa sunno u ah ineey Soomaan maalinka Carafo ayagoo rajeynaya danbi dhaafka rabbigood iyo naxariistiisa. Waxaa ka sugnatay Rasuulkeena (صلى الله عليه وسلم) inuu kayiri soonka maalinka Carafo: “Wuxuu tirtiraa sanadkii lasoo dhaafay iyo kan soo socda danbiyadooda”. Waxaa wariyay Muslim. Wuxuu kaloo Muslim ku wariyay sanadkiisa Caaisho ineey ka wariday nabiga (صلى الله عليه وسلم) inuu yiri:
عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء) رواه مسلم
Ma jiro maalin uu Allaah uga xorayn badanyahay naarta addoomadiisa maalinka Carafo. Wuuna soo dhawaadaa markaasuu u faaniyaa malaa’igtiisa uuna ku yiraahdaa: Kuwaasi maxay doonayaan? Wuxuu kaloo xadiis saxiis ah ku yiri Rasuulku (صلى الله عليه وسلم): Ducada waxaa ugu fiican Ducada maalinka Carafo.
Ibnul Mubaarak wuxuu yiri: galabkii Carafo ayaan ugu imaaday Sufyaan Al-Thowry oo jilba jabsaday, indhihiisuna ay qubanayaan oohin darteed, markasuu isoo daymooday. Waxaan ku iri: Yaa ugu ayaan daran dadka kulankan carafo isugu yimi? Wuxuu yiri: midka umalaynaya inuu Allaah udanbi dhaafeeynin.
Walaalayaal waxaan si weyn idinku dhiiri galineynaa inaad badisaan baryida Allah SWT, dhambi dhaaf weydiistaan Allah, Allah waxaan ka rajeyheynaa inuu aqbalo ducadeena sidoo kale waxaan Allah ka baryeynaa inuu sanadkan sanadkiisa kale nagu gaarsiiyo bash-bash.